खुल्लामन्च: April 2010
तिमी त शहर पो पसेछौ !
भोकले तिम्रा सन्तान थुतुनो आं गरि बसेका छन् ।
तिमी भने भाईबहिनी पढ्ने स्कुल कब्जा गरि
मासु र भात खाएर 'आन्दोलन' गर्न ? शहर पसेका छौ ।
तिमी चामल खोज्न हिंडेको भए
कम से कम एक मानो कोदो त पाउथ्यौ ।
तिम्रा जहानका मुखमा एक फांको आहार पर्थ्यो,
र तिमीलाई शायद्, सन्तोश मिल्थ्यो होला ।
तिम्रो घरको टुकिमा टालो मात्रै छ,
तिम्रा गह्राहरुमा बिजुलिका खम्बाहरु छन्,
न तिम्रो बचेरो पढ्ने स्कुल खुलेको छ,
न महाजनका छोराहरु पढ्ने बोर्डिङ नै !
बीरामी ती तिम्रा बुढा बालाई अस्पताल लाने डोको छैन गाउंमा,
तीनलाई बोक्न न छिमेकी भतिजो छ, न तिम्रो भाई
न त तिमी नै छौ ।
एउटा डोको खोज्न हिंडेको भए
कम से कम थुन्से त पाउथ्यौ ।
तिमी हो-हल्लामा 'आन्दोलन्' ? गर्न
शहर पसेका छौ ।
तिमी किन तामाका ती कलिला मुनाहरु काट्छौ ?
र कटबांसहरु तिखार्छौ ?
तिमिले कटबांसले बजाउने टाउकाहरु पनि त
आफ्नै भाइ-भतिजाहरुका हुन नि ।
तिनका घाउबाट निस्कने रगतले तिम्रो ज्यान शिरिङ्ग हुदैन र ?
बरु, तिमी कलम खोज्न हिंडेको भए
मलम पाउथ्यौ होला ।
तिमी त सलाम खाने लालशामा
शहर पो पसेछौ ।
हिजो भरौटे बनेर हिडेका हाम्रा दाजुहरुले के पाए ?
हेर त तिनका कन्तबिजोक ।
आन्दोलनमा गोली खाए,
फटाहा नेताका बोली पाए,
तिनका छोराहरु ओहोदामा,
हाम्रा दाजुहरु, गाउ फर्के ।
यसरी फर्केका अपाङ्ग दाजुहरु तर्साउन तिमी
गोली बोक्दै छौ ?
खुकुरी भिर्दै छौ ?
दाजु 'तह लाउन' टुडिखेलमा कसरत गर्दै छौ ?
हलो कांधमा हलेर बरु बांजो जोत्न हिंडेको भए हुन्थ्यो,
तिमी त खुल्लामन्चमा नेताको योगा हेर्न,
चमात्कार हेर्न, होटेल भत्काएर बनाएको नेताको निवासमा
मासु भात खान हिंडेछौ,
तिम्रो चिट्ठीको जबाफ :
सुन्दर र हस्तलिखित तिम्रा सम्झनाका ति चिठिका पानाहरुको लागि धन्यवाद !
मलाई त के हुनु छ र ? अर्काको देशमा भांडा माझ्न आउनेको के नौलो समाचार हुन्छ र ? तिमीले आफ्न घरमा बसेकाहरु सँग प्रत्येक महिना माग्ने गरेकी भाडा जस्तो सजिलो हुंदोरहेनछ, परदेशको जिन्दगी । राजधानिमा आलिशान महल, सुन्दर फ्ल्याटहरु, घरकै सटरमा स्व-ब्यापार । त्यो पो जिन्दगि, तिम्रो पो जिन्दगी । अर्कैसँग ऋण काढेर दु:ख बेसाउन परदेशिएका हामी अभागिहरुको के नयाँ त के पुरानो अनि के को साँचो बिसन्चो ? तिमीले छाडेर गएका मायाका यादहरु जस्ता निर्घात बिझाउने खालका हुँदा रहेछन्, परदेशका दैनिकी । न कुनै समाचार, न खाने ठेगान, न त सन्तोष नै ।
'के काम गर्छौ ? कति कमाउछौ ?' भनेकी रहिछौ ।
तिमीलाई चिन्नु एउटा ठुलो भूल भएछ, मेरो । 'प्रेम' त्यो थियो भने त आज 'मेरो सम्झनालाई साक्षी राख, दुनियांमा प्रेम भन्दा ठुलो पैसा छैन' भन्थ्यौ हौली । तिमीले भगवानसँग भाकेका भाकलहरु भुले पछि अनी साचो मायाको साटो सपनाको धन तिमीमा फुलेपछी, तिमीले जसरी नै मान्छेले मान्छेलाई हेप्न रत्तिभर बांकी राख्दो रहेनछ । खैर, ठिकै छ । चाहना भन्दा ठुलो कुरो रहेछ, भाग्य । सांचो मायाको मेरो चाहना अपुरो रह्यो भने भाग्यमानी तिम्रो दर्हो खप्परले धन पायौ, सुख पायौ । त्यसैले त आज, सम्झनाको भकारिमा मुसा बनेर म धान चपाउने चेस्टा गर्दैछु भने तिमी महारानी मानेर मैले चाखेको भकारीको धानको चामलको भातमा घीऊ झानेर खादैंछयौ । पुर्पुरो हुनु त तिम्रो जस्तो, दिनभरी तिम्रो खेतमा आली लाउने खेतालाको माया भन्दा, साउने झरिमा कुलोको पानी चोर्न आउने 'पानी चोर' को महल पाउनु ।
'अनि, फर्किने कहीले'नि' अं रे ?
यसो हुन्छ नि, तिम्रा महलमा फस्टाएका 'बिचरा, ती मेरा भतिजाहरु', जस्तै मेरो परदेशी भाडाको कोठामा हुर्कदैं गरेको बिचरोको के छ त खबर, भन्नु । तिमी भन्दा अलिकती अभागिनी 'मेरी' को हालखब्रर के छ त भन्नु, यसो सोध्नु ! ठाडै, मलाई सोधेको छ यार्, अनी मैले कमाउने पैसा र म फर्कने मिती ? खोइ भुपू मायालु, मैले तिम्रो ताल बुझिन । न म स्वदेश फर्केर तिम्रो र मेरो बीचको कालिगण्डकी माथि तुरतुरेतिर फर्कन्छ, न 'ती भतिजाहरुले' मलाई चिन्दछन र न त तिमो महलमा पाइला राख्ने हैसियतको भएको छु, म । गोजिमा दुई चार पैसो त मेरो कहिल्यै भएन र पनि मनमा माया चाँही सधैं भैरह्यो, चाहे त्यो केबल तिम्रो लागि नै किन नहोस्, सदाको लागि । तर अधुरो चाहना, बिझाउने सम्झना र असम्भब बर्तमानको अगाडि तिमीले भाकेका कुनै माइकालाल भगवानको पनि केही लाग्दो रहेनछ ।
खोलाको दुई किनारा भो, तिम्रो र मेरो पिरती !
मायाको त्यहि खोलाको यता पट्टिको किनारामा म 'सिंचाइको पानी' भएर सिन्चिएको छु, दुनियांका खेतमा भने , एउटै बाटो भएर पनि उता पट्टि चाँही गरीब किसानहरुको भर्खर लगाइएको आलीहरुको खेत भत्काउने 'भेल' भएकी छयौ, तिमी । संगै बहेर पनि तिमी भेल र म सङ्लो पानी जस्तै भयो, यो अनौठो पिरतीको मेल र बिमेलको मायाको खेलमा, हाम्रो जिन्दगी । मेरो पुकारा छ, म जसरी बांछे पनि तिमीलाई केही नहोस्, तिम्रा कसैलाई कृपया केही नहोस्, तिम्रा सुन्दर महलका भित्ताहरुमा अरुहरुका दाग नलागुन्, धर्ती फाटेपनी हासिरहोस्, तिम्रो मुहार । यही छ तिमीलाई मेरो शुभकामना र तिम्रो चिट्ठीको जबाफ ।